China Burner ngwa eji arụ ọrụ na ọkụ na - emepụta ihe na ndị na - eweta ya | Atụmatụ
Burner bụ ụdị nke mechatronics akụrụngwa na nnukwu akpaaka mmemme. Dị ka ọrụ ya si dị, a ga-ekewa ya na usoro ise: usoro ikuku, usoro mgbanye, usoro nchọpụta, usoro ọkụ na usoro njikwa ọkụ.
Anyị na-enye a dịgasị iche iche nke ulo oru burners maka iche iche ulo oru kpo oku ngwa. Ndị na-ere ọkụ anyị na-eji teknụzụ combustion dị elu iji hụ na arụmọrụ kachasị na arụmọrụ. Onye ọ bụla n'ime ndị na-ere ọkụ anyị na-akwado otu ndị injinị na-ere ọkụ iji hụ na ị na-eji ngwa ngwa ọkụ. A pụrụ ịdabere na gas burners, mmanụ burners, sọrọ mmanụ burners na zuru ezu ulo oru burner usoro, anyị na-enye gị nhọrọ amamihe na usoro nke uru, pụrụ ịdabere na arụmọrụ gị kpo oku mkpa.
A na-amụ ihe ọkụ anyị n'ụzọ zuru ezu site na imewe ruo n'ihe owuwu na ule ikpeazụ. Anyị nwekwara ike ịhazi ndị na-ere ọkụ site na iji ọtụtụ ụdị na nha iji gboo mkpa nke ndị ahịa anyị.
Ọkụ ngwa ngwa mere na China HK Industrylọ ọrụ Petrochemical ISO 8062 CT6 12.55 n'arọ
Ngwa oku eji eji ọkụ ọkụ HH Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ ISO 8062 CT6 1.6 n'arọ
A na-atụ anya na usoro mmepe n'ọdịnihu nke ụlọ ọrụ petrochemical mba ụwa ga-abụ mgbanwe na nhazi nke akụrụngwa, na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke obere carbon ga-abanye na ngwa ngwa kemịkal. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, gọọmentị China emeela ka nlekọta nke nchekwa gburugburu ebe obibi sie ike ma tinye ihe ndị dị elu maka nchekwa gburugburu ebe obibi na arụmọrụ nchekwa nke ndị na-ere ọkụ.
Osote: Igwe anaghị agba nchara grate maka kwes ike osisi
Echefuola wax nkedo burner ngwa eji na Pita ...
Igwe anaghị agba nchara mwekota nke mgbatị akụkụ
Omenala burner ngwa na Petrochemical indu ...
Igwe anaghị agba nchara grate maka kwes ike osisi
Omenala uzuzu metallurgy ụgbọ mmiri